गोल्ड मेडल थाप्न थाल चोर्नुपर्‍यो | We Nepali
२०७१ भदौ २४ गते १९:१३
…ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल.. भन्ने कवितांश कवि लेखनाथ पौड्यालले बोलमाया गुरुङकै लागि लेखिदिएजस्तो लाग्छ । करिब ४० वर्षअघि घरको ‘सपोर्ट’ बिनै रुढीवादी समाजको पर्दा च्यात्दै नृत्यमा नेपाल टप गर्ने उनको जीवन दन्त्यकथा जस्तै लाग्छ ।
त्यसो त उनलाई पनि थाहा छैन कतिबेर कसरी नृत्यको रस बस्यो भनेर । सुवेदार उदवर गुरुङकी कान्छी छोरी उनले चारवर्षको उमेरदेखि पोखरामा बस्न पाइन् । कन्या हाइस्कुलमा पढ्न पाएकी उनलाई यति याद छ आफू ५/१० वर्षको हुादा टोलटोलमा राजाको जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो । त्यसमा स्कुलबाट उत्कृष्ट नृत्य लैजाँदा उनी पर्ने गर्थिन् । र, त्यतिबेलादेखि नै उनले नाचेको परिवारले मन नपराएको पनि उनलाई हेक्का छ । भन्ने गर्थे रे, ‘छोरी मान्छे नाच्न हुन्न । कुलको नाक काटिन्छ ।’
काठमाडौँबाट विदा मनाउन होला राजारानी पोखरा गइरहन्थे । मनोरञ्जनका लागि उनीहरुलाई कन्या स्कुलको नाच नभइ नहुने । बोलमाया बिना अपूरो हुन्थ्यो कन्या स्कुलको नाच । “अहिले कसरी चर्चित हुने भन्ने छ तर त्यतिखेर चर्चित हुनु पनि इज्जतै गुमाउनु जस्तो थियो”, हाल युकेमा बसोबासरत् उनले भनिन् । बाउआमाको पिटाइ सहादै भए पनि उनले नृत्यलाई छोडिनन् ।
कक्षा ८ पढ्दा २०२७ सालमा उनले जिल्ला, अञ्चल र राष्ट्रियस्तरमै नृत्य प्रतियोगितामा पहिलो स्थान जमाइन् । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जान उनलाई घरबाट अनुमति दिइएन, बाटो खर्च पनि दिइएन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । उनी पनि के कम घरबाट आठवटा काँसको थाल चोरिन् र बेचेर बाटो खर्च बनाइन् । उनी भन्छिन्, “गोल्ड मेडल जितेर आउँदा पनि घरबाट स्याबासी पाइएन ।”
स्वर्गीय राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, उनीहरुका आमा रत्न र उनीहरुका पाहुना उनका नृत्यका दर्शक हुन्थे । २०२६ सालतिर होला तत्कालीन राजकुमार वीरेन्द्रको निम्तामा नेपाल आएका १२ देशका राजकुमारहरुलाई नृत्य देखाउँदा बेलायतका राजकुमार चाल्र्स पनि दर्शकदीर्धामा भएको उनलाई सम्झना छ । त्यो बेला वीरेन्द्रले ‘ताल पर्‍यो निउरो निउरो’ भन्ने गीत गाएको उनी बिर्सदिनन् । २०२७ सालमा राजा वीरेन्द्रकी आमा रत्नलाई पेटमा चोट लागेको बेला नारायणहिटी दरबारबाटै बोलावट भएर नाच्न गएको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, “कलाकारको सानोमा सानो र माथि माथिसम्म पहुँच हुँदोरै’छ ।”
नृत्यमा नेपाल टप भएपछि उनलाई कलाकारितामै लाग्न मन थियो । फिल्महरुबाट अफर नआएको पनि होइन । तर परिवार भइदियो काँडेतार । तत्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (आरएनएसी) बाट एअर होस्टेस बन्न अनुरोध पनि आएको थियो रे । प्लेन चढ्न डर लाग्ने भएकाले उनले त्यो पनि लत्याइन् । बाउआमालाई थामथुम पारेर केही समय उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अस्थायी जागिर खाइन् । तर त्यहाँ पनि ‘राम्रो होइन हाम्रो मान्छे’लाई राखिएपछि उनी विरक्तिइन् । बाउआमाको जोड हुर्केकी छोरीको विहे गराउनमा छँदै थियो । उनलाई पनि लाग्यो बरु विहे गरेपछि पो कलाकारितामा स्वतन्त्र भएर लाग्न पाइन्छ कि ?
तावाबाट उम्केको माछो भूङ्ग्रोमा । लाहुरे श्रीमान् पनि परे कलाकारिता मन नपराउने । विवाह भएपछि उनलाई निम्तो आयो यूरोप भ्रमणमा जाने । विश्वका ९६ देशका कलाकारले आफ्नो प्रतिभा देखाउने कार्यक्रममा उनले पनि भाग लिनु थियो । श्रीमान् राजी थिएनन् । उनले श्रीमानलाई सम्झाइन् र सन् १९७३ मा जर्मन, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन, युगोस्लाभिया (तत्कालीन), युकेमा नृत्य देखाउँदै तीन महिना बिताइन् । एभरेस्ट कल्चर ग्रुपले समन्वय गरेको सो टोलीमा २८ नेपाली कलाकार थिए ।
बेल्जियमको दरबारमा नृत्य देखाएपछि रानीले सोधिन् रे-कहाँ सिक्यौ यति राम्रो नृत्य ? हुन पनि उनले अहिलेसम्म कहीँ नृत्य सिकेकी छैनन् । जो जति जानेकी छिन् त्यसलाई भगवान र प्रकृतिको देन भन्छिन् । “अहिलेजस्तो स्कुलमा नृत्य शिक्षकहरु हुँदैन थिए, गणेश शेरचन (पूर्व मन्त्री) हरुले स्कुलमा कहिलेकाहीँ ताल सिकाउनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा चेतन कार्कीले केही निर्देशन दिनुभएको थियो । वास्तवमा मेरो गुरु कोही छैन ।” उनले भनिन् ।
खासमा उनको सपना थियो नृत्य पाठशाला खोल्ने । श्रीमानले मन नपराएपछि त्यो सपना त्यत्तिकै तुहियो । तर उनी श्रीमान र घर (माइती) लाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरुभन्दा पनि त्यतिबेलाको समाजलाई दोषी देख्छिन् उनी । एकपटक गण्डकी अञ्चलका तत्कालीन अञ्चलाधीश गमबहादुर गुरुङले गाउँफर्क अभियानका क्रममा नृत्य देखाउन उनलाई स्याङ्जा लगेका थिए । कार्यक्रममा उनको नाम बोलाउन लागिएको थियो । उनी आफ्नो पालो पर्खँदै ब्याक स्टेजमा थिइन् ठीक त्यहीबेला पछाडिबाट बाउआमाले तानेर गाडीमा राखी पोखरा ल्याएको उनी कहिल्यै भुल्दिनन् । “कुटाइ खाने, पिटाइले खुट्टा सुन्निने त कति भयो कति” उनले थपिन्, “अहिलेजस्तो समाज भए म धेरै माथि जानसक्थेँ” अझ उनलाई लाग्छ, “मजस्ता र मभन्दा प्रतिभाशाली कति कलाकार त्यत्तिकै मरे होलान् म पो आँट गरेर गोल्ड मेडलिस्टसम्म भएँ ।”
राजारानीले कतिलाई तिम्रो चाहना के छ भनेर सोधेको, पढाएको पनि नसुनिएको/नपढिएको होइन । त्यसैले उनलाई सोधियो, ‘तपाईलाई चाहिँ राजपरिवारले तिम्रो के इच्छा छ भनेर सोधेनन् ?’ “खासमा हामी स्वतन्त्र कलाकार हुन सकेनौँ । सिडियो, आर्मी, पुलिसका चिफहरुले आफ्नो फूली बढाउन मात्र हामीलाई प्रयोग गरे । हामीलाई केही थाहा थिएन । नाच देखाउन पाए पुग्यो ।”
आफ्नो सोचाइको जीवन अधकल्चो भएपनि उनी अहिले अरु कलाकारलाई प्रोत्साहन दिन लागिपरेकी छिन् । पोखराको हिमाली साँस्कृतिक परिवार, पोखरेली युवा सास्कृति संघ, झलकमान गन्धर्व ट्रष्ट, सेती गंगा सत्यसाई केन्द्र, साइ विद्याश्रम, नदीपुरमा आवद्ध रहेर उनले कलाकारहरुलाई उत्प्रेरणा दिइरहेकी छिन् ।